သက်ဝေ: ဒီဇင်ဘာ နေ့စွဲများ
pandora November 30, 2010 at 11:56 PM
လိုက်ပြီးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ နှင်းတွေနဲ့အတူ အေးချမ်းကြပါစေ။ :)
ညီမလေး December 1, 2010 at 12:22 AM
ကောင်းလိုက်တဲ့ အိုင်ဒီယာ... မွေးနေ့ရှင်များကော မွေးနေ့ရှင်မဟုတ်သူများပါ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ဒီဇင်ဘာဖြစ်ပါစေလို့ ညီမလေးလဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ် မမသက်ဝေ။
ဇွန်မိုးစက် December 1, 2010 at 12:34 AM
Sweet December starts withasweet post.
Happy b'day to everyone in the post.
ဒီဇင်ဘာမှာ လူပျိုဘ၀ကနေကျွတ်မယ့် ဟိုနာမည်ကျော် ဘလော့ဂါအစ်ကိုကြီးရဲ့ မင်္ဂလာရက်တော့ မှတ်ထားလိုက်သလားလို့... အဟက်... :D
PhyoPhyo December 1, 2010 at 12:36 AM
မသက်ဝေ ဆုတောင်းပေးထားတဲ့ မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ၊ မသက်ဝေနဲ့ အာလုံးလည်း ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ Sweet December !
khin oo may December 1, 2010 at 12:41 AM
Ko Boyz December 1, 2010 at 12:57 AM
Lu Zoe. :-)
sonata-cantata December 1, 2010 at 1:12 AM
တို့များလည်း မနက်ဖန်ကျရင် ကိုယ်ပွားလေးတယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲ ဆင်နွဲရဦးမယ်...
ရွှန်းမီ December 1, 2010 at 2:13 AM
အားလုံးပေါင်းပြီး ဒီကနေ ဆုတောင်းပေးလိုက်မယ် ..
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ :-)
ကလူသစ် December 1, 2010 at 8:21 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကောလဟာလတွေ မယုံပါနဲ့လို့ ပြောပရစေ။ :)
ရွှေရတုမှတ်တမ်း December 1, 2010 at 9:16 AM
ကြည့်စမ်း ဖွား/ သေ စာရင်းဌာနမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့မှန်း ခုမှသိတော့တယ်.. ဒို့မွေးစာရင်းလေးလဲ ရှိသလားမသိဘူး..
ချစ်ကြည်အေး December 1, 2010 at 9:59 AM
သက်ဝေနဲ့အတူ အားလုံးအတွက် ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်...
မွေးနေ့ရှင်တွေ....လက်ဆောင်ရရင် ဝေစုခွဲရမဲ့ စာရင်းထဲ တို့နာမည်လည်း မမေ့နဲ့နော်....
မောင်မျိုး December 1, 2010 at 10:16 AM
ကျနော်လည်း ၀င်ဆုတောင်းသွား ဒီဇင်ဘာမွေးနေ့ရှင်များ အားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့း)
Myo Mon Yee Oo December 1, 2010 at 11:30 AM
အစ်မရဲ့စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဖော်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်
sweet december ကိုချစ်တဲ့ မွန်မွန်
khet myint myint December 1, 2010 at 11:54 AM
ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် အန်တီသက်ဝေ :-D
ခုလို သတိတရ ဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက် တစ်မိသားစုလုံး ဒီဇင်ဘာလိုပဲ ချမ်းချမ်းချိုချို ပျော်ရွှင်ကြပါစေ ။
သိင်္ဂါကျော် December 1, 2010 at 4:18 PM
sweet Dec က ကိုယ့်မွေးနေ့...
အဲဒါကြောင့် ဒီဇင်ဘာကို ချစ်တယ်..
ဒီဇင်ဘာ မွေးနေ့ရှင်များလည်း ပျော်ရွှင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..
I love you.Thank you ...:) :)
T T Sweet December 2, 2010 at 12:28 AM
အပေါ်ကခိုင်က တို့သယ်ရင်းလား။ ခိုင်နှင့်တကွ အားလုံးသော ဒီဇင်ဘာဖွားများ ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။
အန်တီသက်ဝေရဲ့ တူမလေးကျန်သွားတယ်။ ဂျူဂျူလဲ ဒီဇင်ဘာပဲဂျ။
မိုးငွေ့...... December 2, 2010 at 11:23 AM
မမသက်ဝေရဲ့ ဒီဇင်ဘာမွေးနေ့ရှင်များဆုတောင်းပွဲကို လာအားပေးပါတယ်...း)
ZZZ December 2, 2010 at 1:47 PM
ဒီဇင်ဘာမွေးနေ.ရှင်များ ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ ..
မမကွန်းမွေးနေ. 1612 ကို 4D ထိုးဦးမှ
ကျွန်တော်ထီပေါက်အောင် မွေးနေ.ရှင်မှ ဒီဇင်ဘာလတစ်လလုံး သတ်သတ်လွတ်စားပါရန် (အသားမစားရန်) မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ခွိခွိ